व्यक्तिको पावर | Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 25, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले हामीले वास्तवमा सिस्कोमा केही बोर्डको साथ बैठक लियौं टेलीप्रिसेंस र यो आश्चर्यजनक केहि छोटो थिएन। कसैसँग पूर्ण आकार र अनुहार-देखि-अनुहार बोल्दा अविश्वसनीय मूल्य हुन्छ। सिसकोका मानिसहरू सहमत छन् र यसलाई बाहिर राखेका छन् व्यक्तिगत बैठकहरूको शक्तिमा इन्फोग्राफिक.
वितरित ग्लोबलाइज्ड बजारको मागले संगठनहरूलाई सहकर्मीहरू, आपूर्तिकर्ता / साझेदारहरू, र ग्राहकहरू जसले लामो दूरीबाट अलग गर्न सकिन्छ भनेर कुराकानी गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ। सिस्को द्वारा प्रायोजित प्रायः द इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटद्वारा गरिएको एउटा वैश्विक सर्वेक्षणले यस बारे 862२ व्यापारी नेताहरूको भावनाको मूल्याsed्कन गरेको छ। ब्यक्तिगत बैठकको मान र impact० भन्दा बढी व्यवसायिक प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको प्रभाव। त्यसोभए, के निर्णय छ? के हामीले व्यक्तिगत रूपमा सोच्न मिल्छ जस्तो शक्तिशाली सोच छ?
इन्फोग्राफिकलेaबाट परिणाम प्रतिनिधित्व गर्दछ दि इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट द्वारा गरिएको विश्वव्यापी सर्वेक्षण, सिस्को द्वारा प्रायोजित, कि meetings862२ व्यावसायिक नेताहरूको व्यक्तिगत मूल्यांकनको मूल्य र and० भन्दा बढी व्यवसायिक प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको प्रभावको बारेमा भावनाहरूको मूल्या .्कन गर्दछ।
टैग: सिस्कोसंचारव्यक्तिगत - रुपमामार्केटिंग भिडियोहरूप्रविधिटेलीप्रिसन्स
Issuu: मार्केटिंगका लागि एक उपकरण, केवल म्यागजिनहरू होइन
अप्रिल 25, 2012 मा 8: 14 PM
महान बिन्दु डग! यो कारण हो कि म केटी स्काउट कुकीहरू कहिल्यै अस्वीकार गर्न सक्दिन :)।
यो विचार पनि गाय कावासाकीको4स्तम्भको जादूसँग सम्बन्धित छ। व्यक्तिमा शक्तिशाली छ, तर तपाईं मनपर्ने, भरपर्दो, फरक, आदि हुन आवश्यक छ।